သတ္တိခဲပေါက်စီ… – PVTV Myanmar
·9months ago ·18 Comments
BBC News ၏ သတ္တိခဲပေါက်စီကို ခံစားတင်ပြသည်။
Like – 10K Share – 1696
ကနီမြို့နယ် ကျေးရွာတရွာ သပိတ်
၃၄၄ ရက်မြောက်နေ့ ကလေးမြို့ပင်မသပိတ်
Wint Yee says:
2021-04-30 at 9:53 PM
ကြည့်နေရင်း မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိလရောက်ပါစေ ပေါက်စီလေး🙏
2021-04-30 at 11:03 PM
ညီလေး ပေါက်စီ အနာဂါတ် အတွက် အသက်ပေးသွာတာ မင်းတာဝန်ကျေပါတယ်ကွာ ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်🙏🙏🙏
Daw Shwe Phyo says:
2021-05-01 at 12:39 AM
သူရဲကောင်းလေး ပေါက်စီ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ။
2021-05-01 at 12:42 AM
အာဇာနည် သူရဲကောင်း လေး ပေါက်စီ
NayMin Ta says:
2021-05-01 at 7:00 AM
၃မိနစ် ကနေ ၅မိနစ် present လုပ်နိုင်ရင်
2021-05-01 at 8:44 AM
အ ထူး ကြေ ကွဲ ဝမ်း နည်းမျက် ရည် ကျ ရ ပါ တယ်
သားလေး ပေါက်စီနဲ့ ကျဆုံး သွား သော အာဇာနည်သူရဲကောင်း များ အား ပြည်သူ များ ကအလေး ပြု ပါ တယ်..ကောင်း ရာသုဂတိ ရောက် ပါ စေ
မိသားစုတွေ နဲ့ ထပ် တူ ဝမ်း နည်း ရ ပါ.
ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီး တွေ မည်သူ တဦး တယောက် မှ ထပ်မံ မဆုံ ရ ပါစေ နဲ့ လို့ ဆု တောင်း ပါ တယ်
ကမ္ဘာပေါ် နဲ့ မြန်မာ့ မြေ ပေါ် မှာ အာဏာ ရှင် အုပ် ချုပ် သူ များ အမြန်ဆုံး ကျဆုံး ပြီး
တရားသော စစ်ပွဲများ အောင် မြင် ပါစေ.
2021-05-01 at 8:51 AM
Aung Than Hteik says:
2021-05-01 at 9:01 AM
သူရဲကောင်း ပေါက်စီလေး ရဲ့ သူ့မိသားစု အတွက် ဆောက်ပေးချင်တဲ့ အိမ်လေးကို ဝိုင်းလှူကြရင် ကောင်းမယ်
HY A Kyaw says:
2021-05-01 at 9:34 AM
နား​ထောင်ရင်းနဲ့ အင်မတန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်😢😭 မိမိ အသက်ကို မငဲ့ကွက်ဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သူရဲ​ကောင်းကြီးပါ။ အရမ်း​လေးစား ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တကယ့်သတ္တိ​ပြောင်​မြောက်လွန်းတဲ့ ​​မောင်ပေါက်စီ​လေး​ရေ.. ​မြင့်မြတ်ပြီး​ကောင်းမွန်သောဘုံဘဝ မှာ ​အေးချမ်းပါ​စေ🌹🌹🌹
2021-05-01 at 12:27 PM
​ပေါက်စီရာမင်းလိုစိတ်ဓါတ်မျိုး​သေခန်နည်း GLတွေ မ​သေခင် GL​တွေ
စိတ်ဓါတ်နဲ့များကွာပါ့ကွာ မိုးနဲ့​​မြေလို​ပေါ့ကွာ ​ပေါက်စီတို့လိုက​လေး​တွေ​သေတာထက်​သေမှာ​​ကြောက်တဲ့GL​တွေကို​သေ​စေချင်တယ် ​ကောင်းရာသုကတိလားပါ​စေ
Ye Soewin says:
2021-05-01 at 4:12 PM
Sie Oo says:
2021-05-01 at 4:59 PM
All children must be in the classroom after spring revoluaton 😢
Ohm Kyaw says:
2021-05-01 at 8:47 PM
Lin Lin Lay Lay says:
2021-05-01 at 11:20 PM
Phyu Thae says:
2021-05-02 at 10:24 AM
Ki Lilly says:
2021-05-04 at 12:09 PM
အေမ့ အိမ္ says:
2021-05-30 at 6:26 PM
​ေတာက္​ ​ေခၚက္​့ ရင္​နဲ လ်ွာ​ေတြနာ လွၿပီ က်မ္​းနဲ အထိုး ခံရတဲ လက္​မွာလဲ အသမာ​ေတြ တက္​​ေနၿပီ နား​ေထာင္​ၿပီ ရင္​ထဲ အသဲထဲကို သံခြ်န္​နဲ ထိုးလိုက္​့သလို ခံစားရတယ္​ ဒီအ​ေက်ာင္​း ​ေလးကို ကြၽန္​​ေတာ္​ ဆံုး​ေအာင္​ နားမ​ေထာင္​ ျဖစ္​​ေတာ့ပါ ညီ​ေလး ​ေပၚက္​စီ မင္​တားဝန္​​ေကြၽသြာၿပီ ၾကံတာ အကိုတာဝန္​ သာထားပါကြာ
2021-06-02 at 12:59 PM
-နိုင်ငံတကာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို တရားစွဲဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး…